OnePlus dia hanohy hanolotra maodely roa isaky ny taranaka | Androidsis
Eder Ferreño | | Finday, OnePlus
Tamin'ity taona ity dia nanaitra anay ny OnePlus maneho modely roa ao anatin'ny faritra avo-lohataona amin'ny lohataona. Zavatra izay naverina tamin'ny fararano niaraka tamin'ny maodely vaovao. Toa io no paikady vaovao an'ny marika sinoa ho avy, araka ny fanamafisan'ny talen'ny talen'ny orinasa tamin'ny resadresaka nifanaovana sahady. Ka ny modely tsirairay dia hanana maodely roa.
Ny vokatra tsara amin'ity taona ity, miaraka amina modely roa amin'ny lohataona ary roa hafa amin'ny fararano, toa maharesy lahatra an'i OnePlus izy ireo. Azontsika atao koa ny manantena fa ho tonga miaraka amina fitaovana roa ny faritra vaovao tsirairay, izay mitady hanome fahafaham-po ny karazana mpampiasa rehetra eny an-tsena.
Ny orinasa dia miasa amin'ny maodeliny amin'ny taona ho avy, The OnePlus 8 sy 8 Pro, havoaka amin'ny telovolana faharoa Amin'ny herintaona. Hanohy hiloka amin'ny maodely maotina kokoa izy ireo, miaraka amin'ny vidiny ambany sy maodely Pro, izay hamela antsika hanatsara sy hanavao bebe kokoa. Izy ireo dia singa azo antoka fa tian'ny maro.
Ny varotra tsara ananany amin'ity taona ity izy ireo no tena manosika ny marika amin'ity lafiny ity. Ka antenain'izy ireo ny hamerina an'io fahombiazana io amin'ny taranaka ho avy, izay antenaina hitadidy fa mitovy ihany ny varotra. Indrindra fa ny marika dia mitombo manerantany.
Ity paikady OnePlus amin'ny fandefasana modely roa ity dia miasa ho azy ireo indrindra amin'ny tsena toa an'i India. Zava-dehibe izany, satria i India no tsena faharoa manerantany. Ankoatry ny maha-tsena izay ahazoan'ny marika marika fitomboana eo amin'ny sehatra premium.
Noho izany dia tsy fahita firy amin'izy ireo ny mitady hitazona ity paikady ity, raha mino izy ireo fa amin'izany fomba izany dia afaka mivarotra tsara kokoa sy manamafy ny toerany eo amin'ny tsena. Mbola hiandry antsasaky ny taona isika, mihoatra na latsaka, mandra-pahatongan'ny telefaon'izy ireo vaovao. Azo antoka fa amin'ity volana ity dia mahazo vaovao maro momba azy ireo isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus dia hanohy hanolotra maodely roa amin'ny fotoana iray
Crossing Void dia gacha miady amin'ny SEGA ho an'ireo tia anime sy manga